Ka faa'iidayso soo jeedinta hordhaca ah ee Doogee V20, mobilada cusub ee adkeysi badan | Qalabka Wararka
Maanta, Febraayo 21, sugitaan gaaban ka dib soo bandhigiddeeda rasmiga ah, soo saaraha Doogee wuxuu soo saaray V20, taleefoon casri ah oo leh qaar ka mid ah. in ka badan sifooyin soo jiidasho leh oo qiimo aad u kooban. Haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato soo jeedinta hordhaca ah oo aad ka mid tahay 1.000 iibsadayaasha ugu horreeya, waxaad badbaadin kartaa 100 dollar qiimaheeda rasmiga ah.
Qiimaha iibka rasmiga ah ee Doogee V20 waa 399 euro. Laakiin, haddii aad ka faa'iidaysato soo jeedinta hordhaca ah, waxaad heli kartaa casrigan cajiibka ah kaliya $ 299. Doogee V20 muxuu na siinayaa? Waa maxay tilmaamahaagu? Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato terminaalkan, waxaan kugu martiqaadayaa inaad sii wadato akhriska.
2 Shaashada Doogee V20
3 Doogee V20 processor
4 Doogee V20 qaybta sawirka
5 Doogee V20 batari
6 Naqshadeynta, iska caabinta iyo midabada Doogee V20
7 Halkee laga iibsan karaa Doogee V20
Gacaliye 8 cores oo ku habboon shabakadaha 5G
Kaydinta 266 GB UFS 2.2 - ku habboon microSD dambe si loo ballaariyo booska ilaa 512 GB.
Shaashadda Weyn 6.4-inch AMOLED oo ay samaysay Samsung - Qaraarka 2400 x 1080 - Saamiga 20:9 - 409 DPI - Isbarbardhigga 1:80000 - 90 Hz
Bandhig labaad 1.05 inji oo ku yaal dhabarka aaladda ku xigta kamarada
kuwa kale Dareemaha sawirka faraha - aqoonsiga wejiga - chip NFC
Shaashada Doogee V20
Samsung waa soo saaraha ugu weyn ee shaashadaha casriga ah ee adduunka. Intaa waxaa dheer, waa midka bixiya tayada ugu sareysa. Wiilasha Doogee, si ka duwan moodooyinka, waxay ku tiirsanaayeen Samsung terminaalkan cusub.
Doogee V20 wuxuu ka kooban yahay laba shaashad. Shaashada ugu weyn ayaa gaareysa 6,43 inji, isticmaal tignoolajiyada AMOLED, waxay leedahay xallin FullHD +, ka duwan 80000:1 iyo dhalaalka ugu badan ee 500 nits.
Intaa waxaa dheer, waxay ku daraysaa a 90Hz heerka soo kicinta la qabsiga, taas oo noo ogolaanaysa inaan ku raaxaysanno dareeraha labadaba ciyaaraha iyo codsiyada aan ka heli doonin terminaalka kale.
Sida aan soo sheegay, terminaalkani wuxuu leeyahay laba shaashad. Shaashada labaad, oo ku taal dhabarka aaladda, oo ku xigta moduleka kamarada, waa 1,05 inches waxayna noo ogolaanaysaa inaan aragno qofka soo wacaya, aragno fariimaha qoraalka ah, hubinta heerka batteriga, xakameynta dib u soo celinta, waqtiga, xasuusinta...
Doogee V20 processor
Gudaha Doogee V20, waxaan ka heleynaa a 8-core processor kaas oo sidoo kale la socon kara shabakadaha 5G, taas oo noo ogolaan doonta in aan ka faa'iidaysano shabakadan cusub ee si tartiib tartiib ah u ballaarinaysa waddamo badan.
Iyadoo la socota processor-ka 8-core, waxaan ka heleynaa 8 GB RAM xasuusta, nooca LPDDR4X, xusuusta aadka u degdega ah si aad ugu raaxaysato ciyaaraha ugu baahida badan iyada oo aan la helin waqtiyo aad u hooseeya.
Dhanka kaydinta, Doogee V20 waxaa ku jira 256 GB oo kaydinta, USF 2.2 nooca kaydinta iyo in aan ku ballaarin kartaa isticmaalaya kaarka microSD ilaa 512 GB.
Si aad u maamusho dhammaan qalabkaaga, Doogee V20 waa ay maamusho Android 11, nooca Android oo soo bandhigay tiro badan oo astaamo cusub ah marka loo eego noocyadii hore oo ay yar tahay in loo diro Android 12.
Dhanka amniga, Doogee V20 waxa ku jira a farta akhriska iyo aqoonsiga wajiga, shaqo ku habboon marka gacmaheennu ay buuxaan ama wasakh yihiin.
Waxay kujirtaa a Qalabka NFC taas oo noo ogolaanaysa inaan wax ku bixino Google Play. Waxa kale oo ka mid ah badhanka aan ku qeexi karno, iyada oo loo marayo nidaamka, shaqada aan rabno in uu yeesho, haddii ay furayso Google Play, kamarada, browserka ...
Doogee V20 qaybta sawirka
Qaybta sawirka ee terminaalka waa mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan in dhammaan isticmaalayaasha ay falanqeeyaan ka hor inta aysan iibsan hal nooc ama mid kale, oo ay la socdaan awoodda iyo muddada batteriga.
Dareenkan, Doogee V20 wuxuu ka kooban yahay 3 kamaradood, oo leh a 64 MP dareeraha ugu weyn, oo leh 4x zoom indhaha ah iyo daloolka f/1,8.
Waxay kaloo kujirtaa a kamarad aragga habeenkii oo leh xallinta 20 MP, taas oo noo ogolaan doonta inaan aragno mugdiga. Kamarada saddexaad, oo aan la waayi karin, waa muraayad xagal aad u ballaaran oo muuqaalkeedu yahay 130 digrii iyo xallinta 8 MP.
Doogee V20 wuxuu isku xiraa dhanka hore a kamarad 16 MP ah oo ku habboon sawir-qaadista.
Doogee V20 batari
Sida qaybta sawiradu u tahay mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan marka la iibsanayo qalab cusub, batarigu waa mid kale qaybaha ugu muhiimsan in ay tahay in aan ku xisaabtano marka aan bedeleyno terminaalkayaga.
Doogee V20 waxaa ku jira a batari 6.000 mAh ah oo weyn, bateriga kaas oo, isticmaalka caadiga ah, aan ku qaadan karno dhowr maalmood anagoon ku dallacin qalabka iyo ilaa 18 maalmood habka heeganka ah.
Laakiin, haddii aad ka faa'iidaysato, sababtoo ah waa aaladdaada shaqada ama aad isticmaasho waxyaabo badan oo warbaahin ah, ma heli doontid dhib maleh dhamaystirka maalinta oo leh baytari kugu filan si aanad uga werwerin raadinta dabaysha.
Awoodda noocaas ah, waxaad u maleyn kartaa inaad u baahan tahay nus maalin si aad u dalacdo qalabka. Hagaag maya, maadaama ay tahay 33W lacag degdeg ah oo ku habboon, kaas oo kuu ogolaanaya inaad ku dalacdo qalabka wax ka badan saacad.
Haddii aadan ku degdegin, waxaad sidoo kale isticmaali kartaa dallacaadda wireless-ka, dallacaadda bilaa-waayirka ah ee ku habboon 15W Awood leh, oo ku habboon in lagu dallaco mobilka si deggan habeenkii iyo in maalinta xigta ay diyaar u tahay inay si buuxda u tuujiso.
Naqshadeynta, iska caabinta iyo midabada Doogee V20
Haddii, marka lagu daro moobilka casriga ah ee ku habboon shabakadaha 5G, waxaad sidoo kale raadineysaa terminal adkeysi leh, Doogee sidoo kale wuxuu ku siinayaa, maadaama ay ku jirto. MIL-STD-810 shahaado milatari, marka lagu daro IP68 iyo IP69K caadiga ah.
Si ka duwan soosaarayaasha kale ee doorta inay midabeeyaan dhammaan bannaanka terminalka, Doogee ayaa dooranaya u bixi burushka dhinacyada qalabka, kaas oo siinaya muuqaal soo jiidasho leh marka loo eego kuwa kale ee wax soo saarka.
Doogee V20 ayaa lagu heli karaa midabyo khamri cas, Knight madow y cawlan. Waxa kale oo laga heli karaa fiber carbon iyo matte dhammayn, iyada oo aan wax dhalaal ah.
Halkee laga iibsan karaa Doogee V20
Sidaan ku soo sheegay bilawga maqaalkan, Doogee V20 waxa uu maanta lagu iibinayaa $399. Haddi aad degdegayso iyo waxaad ku jirtaa 1.000-ka iibsade ee ugu horreeya, waxaad ka heli kartaa terminaalkan dhamaystiran oo cajiib ah oo qiimo dhimis ah 100 dollar, taas oo ah, ugu yar $ 299.
Waxaad awoodi kartaa iibso doogee v20 ka faa'iidaysiga deeqdan iyada oo loo marayo AliExpress ama si toos ah on the websaydhka soo saaraha. Haddii aad rabto inaad ogaato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan qalabkan, waxaan kugu martiqaadayaa inaad eegto shabakadeeda, oo aad ka heli karto tan isku xirka
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » Telefoon » Mobiles » Ka faa'iidayso soo bandhigista Doogee V20, mobaylka cusub ee adkeysi badan leh